Herinandro iray tao Koety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2018 15:38 GMT
Sasantsasany amin'ireo lohahevitra nampiala voly ireo blaogera koetiana tamin'ity herinandro ity fotsiny ny toetrandro tsy nampoizina, ny tolotra telecom ratsy kalitao ary ny hafainganan'ny fiakaran'ny tsenambola.
Mamaritra ny toetrandro tao Koety tamin'iny herinandro lasa teo iny i Ana Filibini, izay midika hoe Filipiana Aho.
”Mando ary tamin'ny endriny voajanahary be i Koety tamin'ity herinandro ity. Oram-baratra, tselatra, rivo-mahery tahaka ny orana mitondra fotaka, ary ny tena fampisehoana tsara indrindra dia ny firotsahana havandra goavana maro,” hoy nu nosoratan'ilay mpila ravinahitra.
Mametraka fanontaniana tsotra i Qaiss ao amin'ny io81 izay mifantoka amin'ny antony tsy fisian'ny tolotra Push To Talk (PTT) omen'ny orinasam-pifandraisandavitra ao an-toerana, izay ampiasan'ireo olona mpampiasa ny findainy toy ny talkie walkie ary mifampiresaka maimaimpoana raha toa ka ao anatin'ny faritra mifanakaiky izy ireo.
”Fa maninona no tsy manome tolotra toy izany ny MTC (orinasam-pifandraisandavitra), tsy iray amin'ireo mpilalao mahay indrindra ao amin'ny faritra ve ry zareo amin'izao fotoana izao, sa variana amin'ny fanokafana zana-tsamoana 2 any amin'ny Kaontinanta Afrikana izy ireo?”
Fanontaniana be iray nentina avy amin'i Frankom.
Inona no mahasamihafa ny fipoiran'ilay Koreana tomponandraikitra tamin'ny famonoana tao amin'ny Virginia Tech tao anatin'ny firaketana an-tsary izay manamarina azy ho toy ny marary saina sy ny fipoiran'i Ben Laden na i Al Dhawahri sy ny fiantsoana azy ireo ho mampihorohoro sy olona karohina indrindra ao Amerika?
Efa nanapa-kevitra sahady mikasika ny Fitanisana amin'ity Taona ity i Amer, avy ao amin'ny Hilaliya. Dia ny :
”Avy any aminao ny olana fa tsy any amin'ny lalàm-panorenana.”
(Miresaka amin'ireo mpikambana ao amin'ny Fianakaviana Mitantana nandritra ny fihaonana iray tsy mbola nisy hatrizay).
Mandritra izany fotoana izany, miresaka mikasika ny zava-nitranga tao amin'ny tsenambolan'i Koety tamin'ny Alarobia i Q, rehefa tafakatra tamin'ny haavo mbola tsy nisy toa azy ny fifampivarotana noho ireo fifanakalozana ny petrabolan'ny orinasa iray monja!
”Nifantoka tamin'ny zavatra rehetra nitranga teo amin'ny tsenambola androany ny rehetra, ary nanomboka ka tsy mbola nijanona mihitsy ny fanelezana tsaho… ”, hoy izy.
Mandritra izany fotoana izany kosa, mamadika lohahevitra matotra be iray ho lasa mampihomehy mba hanazavana izany i Ziyad, ao amin'ny q80economics.
”Miombon-kevitra ireo mpahay siansa ankehitriny fa tena zavamisy ny fiakaran'ny maripana manerantany ary raha tsy mihetsika dieny izao isika dia handravarava ny vokatr'izany. Noho izany, inona no hitranga eo amin'ny tontolo iainantsika eto Koety ary ahoana no hiatrehantsika ny zavamisy raha toa ka mampihena ny fianteherany amin'ny solika izao tontolo izao? Inona no azontsika atao mba hanoherana ny fiakaran'ny maripana manerantany? Na dia tena matotra be mihitsy aza izany lohahevitra izany, hanolotra valiny kidaladala be aho,” hoy izy, mampitandrina.
Namoaka lahatsoratra izay nalefany tany amin'ny iray tamin'ireo gazety isanandro any Koety i Amer AlZuhair, direkteran'ny sarimihetsika Koetiana izay nandrakitra ho anaty lahatsary roa ny fifidianana farany teo ary nosakanan'ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao ny fandefasana azy ireny, mametraka ity fanontaniana tsotra ity.
”Mba haniry ny fandeferan'ny Andriana Sheikh Sabah Al Ahmad ary hanàla ny fanakanana nataony tamin'ny sarimihetsiko ve ireo olona ao amin'ny Ministeran'ny Fampahalalam-baovao indray andro any?” hoy izy, manontany.
Mandrakotra tranga iray teo an-toerana, izay anoloran'ny mpivarotra fiara ny fiara maoderina vaovao iray i zdistrict, taminà tranga lehibe izay nanakatonana ny lalana lehibe mihitsy aza nandritra ny fotoana iray.
”Fanolorana ny IMSA Lamborghini an'ny IMSA izany, noheverina ho zavatra manokana saingy tsy dia azoko antoka loatra ny lalana tokony nizoran'ilay hetsika. Toa teny ihany koa ny fiaran'ny BMW sy ny Porsche sy ireo olona nitondra ireo fiarany raitra be, ary nisy fiara nahaliana tany. Maro ny olona tonga ary taorian'ny fampisehoana ilay fiara,” hoy izy, manazava.